Indlela yokuqhuba uphando olungundoqo lwegama elingundoqo kwi-Amazon?
Uphando lwegama elingundoqo luyingxenye ebalulekileyo yephulo lokuphucula i-Amazon elifanele lenziwe kwinqanaba lokuqala lokuqalisa ukuveliswa kwemveliso kwi-Amazon. Le nkqubo ibandakanya ukukhangela onke amagama afunekileyo nephezulu afuna ukukhulisa ukuthengisa kwakho. Kubalulekile ukhethe zonke iibini zamagama ezifanelekileyo ukuba abathengi bakho bangasebenzisa ukufumana iimveliso zakho okanye izinto ezinxulumene nazo. Yisisitshixo kwimpumelelo njengoko ukufaneleka komkhiqizo kumbuzo wokukhangela womsebenzisi kuya kuqulunqwa ngokubaluleka kwemigqaliselo yokukhangela esekelwe kuluhlu. Ukuba uye wagqitha ubuncinci ibanga elilodwa elijoliswe kuyo, ke amathuba akho okuvela kwimiphumo yokukhangela enye imibuzo yomsebenzisi iya kunciphisa. Ukuze ugweme ukulahlekelwa ngaphandle kweentengiso kufuneka uhlalutye ukutyekela kwe-Amazon kwaye wenze uluhlu lwezinto eziphambili zokukhangela. Kule nqaku, siza kuxubusha iindlela zokwenza uphando lwegama elingundoqo lwe-Amazon njengepro. Zonke ezi ngcebiso zisekelwe kumava ethu. Ngoko, sinokubiza ngokuba yinto esebenzayo nefanelekileyo.
Iingcebiso kunye nezixhobo eziza kukunceda ukuba wenze uphando oluphezulu lwe-Amazon
Imigaqo yokukhangela efanelekileyo kwi-Amazon kukuba uzibeke kwizicathulo zabaxhasi bakho. Yingakho qalisa iqela lakho lophando ngokucinga malunga nantoni na amagama abathengi bakho abangasebenzisa ukufumana izinto zakho. Kufuneka uqwalasele izinto ezifana nokuba ziza kuthengisa iimveliso zakho, zihlobo luni lemibuzo ababeza kuba nayo, kwaye ziphi na izinto ezizithengayo endaweni yemveliso yakho.
Hlanganisa yonke imigaqo yophando eya kuza engqondweni uze uyihlolisise ngeendlela zokunxibelelana nabantu ukuze ubone oko abantu bathethayo malunga nemveliso yakho. Kuya kukunceda wenze izilungiso ezifunekayo kuluhlu lwakho kwaye ulugqibe. Apha uya kukwazi ukufumana ezinye izivumelanisi, izibhengezo kunye nokuchithwa okuqhelekileyo kusetyenziswa kuluntu.
Ngaba uye wazibuza ukuba ungasebenzisa njani iAmazon ngeenjongo zophando ngegama elingundoqo? Isebenza kakuhle nje. Udinga nje ukuthabatha iibhokisi ezimbalwa kwibhokisi lokukhangela kunye nemveliso iza kubonakala ngokuzenzekelayo njengeziphakamiso. Lo msebenzi oqinileyo awuyi kunika idatha echanekileyo ngokugqithiseleyo kuba ibonisa imigaqo yokukhangela ininzi. Nangona kunjalo, ungaqiniseka ukuba uya kuhanjiswa ngemigqaliselo yokukhangela esemthethweni enokudibaniswa kwisihlomelo sakho semveliso.
Udinga ukuchaneka kunye nesigulane usebenzisa lo msebenzi wokuzimela. Kufuneka ulandele igama lomkhiqizo wakho ngeeleta ze-alfabhethi kwaye uqaphele oko kuza. Kufuneka ufumane imigaqo yokukhangela efanelekileyo neyomeleleyo ehambelana nezinto othengisa ngazo. Ngaphezu koko, iindidi ezicetywayo zinokukunceda ukuba ufumane amanye amaqela ukuba uluhlu lweemveliso zakho.
Ngokomgaqo-nkqubo wokubeka ama-Amazon, iimveliso zakho ziza kubonakala kuphela ngala magama okukhangela oyifakayo ekuhlaleni kwakho kunye nokubuyisela. Kuthetha ukuba akufanele uqukelele nje kuphela imigaqo yokukhangela yamanani ephezulu ekuhlaleni kwakho kodwa kwaye idibanise neenkcukacha eziphambili zomsila eziza kunika amathuba akho ekujoliseni abathengi bakho. Nangona kunjalo, kufuneka uyenze kuphela kwimeko apho unesithuba esongezelelweyo samagama angundoqo. Isicwangciso sakho esisisiseko sifanele sigqibe imigaqo yokucinga echaza imveliso yakho.
Ukuba ungathanda ukufumana imigaqo yokukhangela efanelekileyo ngaphandle kokuchitha ixesha elide kunye nemizamo, unokwenza hlalutyo. Umthombo wokuphefumlela igama elingundoqo awukwazi ukunyulwa phantsi. Khangela la magama kumagama omqhubi wemicandelo, iinhlamvu kunye neenkcazelo. Apha unokufumana amagama angundoqo awunakucinga ngawo. Qinisekisa ukuba ukusetyenziswa kwemveliso kufakwe kwisihloko (f. e. kwesikhumba esinamafutha; isikhumba esomileyo; kubafazi, njl.
Ndihlala ndithi amandla oku ngqamaniso ayilanga ku fanele. Esi sixhobo sinokuba luncedo kuphela kwiilwimi kodwa nakwabathengisi bama-Amazon. Kukunceda ngokukhethekileyo xa kuziwa kwimveliso enokuba negama elilodwa, okanye ingasetyenziselwa kwiimeko ezahlukeneyo. I-Thesaurus inokukunika iindidi zeefom kunye negama.
Ukusebenzisa eli sixhobo lokuphanda ngegama elingundoqo, kufuneka ugcine engqondweni le micimbi elandelayo:
sebenzisa iifomu zegama kunye neelinye;
khangela amagama achaza into oyithengisayo;
musa ukulibala ukwenza iziphambeko eziqhelekileyo;
ungazami ukufumana apho amagama okutshintshela amagama.
Zonke iindlela zokuphanda ngegama eliphambili zingaphumelela ukuba unomgca omnye wemveliso kwaye ezininzi ixesha lamahala. Nangona kunjalo, banokukunika iziphumo ezifanayo njengezixhobo zophando ngegama elingundoqo. Ukuba unemiveliso emininzi kwimpendulo yakho kwaye ungathanda ukwandisa ukuthengisa kwakho, isofthiwe yokukhangela i-Amazon iza kuba yinkqubela kakhulu kwi shishini lakho.
I-Google iyona injini enkulu yokukhangela kwihlabathi, ngoxa i-Amazon enkulu kakhulu kwimveliso yophando. Kuthetha ukuba ininzi idatha yokukhangela kwiGoogle iya kufana ne-Amazon. Ukusebenzisa esi sixhobo, ungayifumana ingcamango yokuba abasebenzisi bakho banokufuna uphando kwaye bafumene imigaqo yokukhangela ukujolisa kwi-Amazon yakho yokuhlawula ngekhefu.Esi sixhobo sikhululekile ukusebenzisa kwaye sinokukunika idatha echanekileyo kwiwebhu. Ukusebenzisa i-GKP, uya kukwazi ukutshekisha umthamo wokusesha wamagama akho okukhangela kunye nokuhlalutya izikhundla zakho zesikhundla somncintiswano. Nangona kunjalo, kufuneka ulungele ukuba idatha ye-GKP ibe yinto eyahlukileyo kwi-Amazon, ngoko kuya kufuneka ulungelelanise.
Ngoko ke, i-Google Keyword Planner yenza inkohliso kodwa inokuba yimingeni ukuyisebenzisa. Ngaphezu koko, kufuna i-akhawunti ye-AdWords.
I-SEMRush ithuluzi lokuphanda igama elingundoqo luza kukunceda ufumane umsila omude. ukukhangela amagama kusekelwe kuhlalutyo oluninzi kunye nabaphandi. Ngeli sixhobo, unokuhlola abakhuphisanayo kwaye ubone ukuba yiyiphi imigaqo yophando eyenza i-traffic ininzi. Inxalenye engcono kakhulu kukuba iyakubonisa izikhundla zakho zegama eliphambili Source .